Ukuhlunga okuzenzakalelayo - indlela elula yokukhanda isikhumba
Namuhla, abaningi banethuba lokujabulela amaholidi asebhishi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka, ngakho manje bambalwa abantu abangamangala ngesikhumba se-swarty ekuqaleni kwenkathi yamaholide noma ngisho ne-bronze tan ebusika. Ungaphinde ufinyelele ubuciko obuhle ngokuchungechunge lwezinqubo kule solarium. Kodwa yini okufanele uyenze kulabo abathi, ngenxa yezimo ezihlukahlukene, abakwazi ukuvakashela i-solarium noma baya emazweni "ashisayo" ngenkathi ebandayo. Ukuze wenze lokhu, kunesixazululo esilula futhi esithengekayo - ukuzibamba, ngosizo lwakho ungakwazi ukufezekisa ngisho ne-tan ezinsukwini ezimbalwa. Ngaphezu kwalokho, lolu khetho luyathandwa kakhulu kubantu abaphupha ngesikhumba esihle esincibilikisiwe, kodwa banokuphikisana nemiphumela yemisebe ye-ultraviolet.
Enye yezinketho ezilula kunazo zonke ze-sunscreen i-spray-tanning spray. Kuleli fomu kulula kakhulu ukusebenzisa ngokulinganayo esikhumbeni, lokhu kuyindlela engcono kakhulu yokusebenzisa. Enye ye-thuluzi elinjalo ukuthi ukuhlanza ukusikhipha kalula kulula ukusebenzisa lezo zincenye zomzimba lapho kunzima ukufinyelela khona - isibonelo, ngemuva. Umphumela wesenzo se-spray uvame ukugcinwa izinsuku ezimbalwa. Ukugqama okumnyama kwesikhumba lapho kusetshenziselwa kutholakala ngokususa ingqimba engenhla ye-epidermis.
Uma ukhetha i-agent yokuthungula, qiniseka ukuthi unake ijubane elibonakala ngalo. Uma kungenjalo, ungase uzithole usesimweni, uzodinga ukuhamba amahora angu-3 ujikeleze indlu ngaphandle kokuhlala phansi, futhi ngaphandle kwezingubo. Izinqumo ezihlukahlukene manje zikuvumela ukuba ukhethe ukuhlanza okuzenzekelayo, okuyinto ebonakala ngaphakathi kwehora elilodwa, futhi ngezinye izikhathi ngesikhathi esifushane. Ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo, kunconywa ukuthi ulungise isikhumba futhi wenze ukucubungula ukususa amaseli esikhumba efile afile. Lokhu kuzolungisa ubuso bayo ukuthi i-pigment isetshenziswe kahle futhi izohlala isikhathi eside.
Uma usebenzisa umkhiqizo wokukhipha, kufanele ulandele imithetho elula. Uma ungafuni ukugcina izandla zakho ezingxoxweni ezidlulele ekubeni ngama-orange, udinga ukubeka amagilavu kuzo. Uma ungathandi ukusebenzisa amagilavu, ngakho-ke ukuze umkhiqizo ungabi nesikhathi sokubeka izandla zakho, geza izandla zakho ngezikhathi ezithile. Ngokuqinisekile ungazama ukwenza yonke inqubo ngokushesha futhi ungaphazanyiswa ngokugeza izandla zakho, kodwa uma ungasebenzisi nje ukuthungula ubuso, kodwa wonke umzimba, khona-ke awukwazi ukufeza umphumela wekhwalithi. Ukuze uthole i-tan enhle kakhulu nenhle, kuyadingeka ukusebenzisa ngokucophelela futhi ngokulinganayo umkhiqizo esikhumbeni sonke.
Ngaphambi kokusebenzisa, ibhodlela le-spray elinesisindo sokuhlanza kufanele lisuswe ngokugcwele futhi lisetshenziswe esikhumbeni esomile nesihlanzekile kusuka ebangeni elingamamitha angu-20. Bese ugaxa ngokucophelela umzimba ngezandla zakho noma nge-napkin. Ngemuva kokumisa umkhiqizo emva kwemizuzu engu-10 ngethebhu yephepha, susa konke okweqile ebusweni bomzimba. Ukuze uthole umthunzi omnyama futhi ogcwele kakhulu, zonke lezi zenzo kufanele ziphindwe isikhathi esisodwa ngaphezulu. Ngemuva kwesicelo sokugcina, thatha izinyathelo zokuqapha - amahora angu-3-4 awukwazi ukuwageza ngaphansi kweshazi noma endlini yokugezela, ukuze ungahlanza ithani elisha elithengiwe. Kunconywa ukuthi ungagqoki izingubo ezimibalabala phakathi nalesi sikhathi, ukuze ungayitholi.
Ukuze ugcine umphumela, inqubo kufanele iphindwe emva kwezinsuku ezingu-4-5. Abakhiqizi abaningi bemikhiqizo yezimonyo zomsebenzi banikela ngezinguquko zabo zokuzikhiya zekhwalithi elihle futhi ezingabizi, ngakho-ke ungakwazi njalo ukhetha ukusebenzisa izeluleko zabangane noma ulwazi lomuntu siqu. I-Firms Christian Dior, i-Clinic, i-Loreal, i-Garnier, i-Johnson-s ne-Lancaster ithente emigqeni yemikhiqizo yabo ngezihumusho ezahlukene, kufaka phakathi ngesifutho. Futhi elinye iphuzu elilodwa: uma ungazange uthande i-tan ephumela, ingasuswa esikhumbeni ngosizo lwesikhwama. Imikhiqizo yobisi nayo isiza ukucacisa isikhumba: kefir, ukhilimu omuncu, yogurt.
Uhlobo lwamakhemikhali eyelashes: konke mayelana nenqubo